Soo dejisan Duolingo 3.23 – Vessoft
Soo dejisan Duolingo
Duolingo – software ah ee waxbarasho raaxo leh oo ku qoran afafka iyo hadlayay horumarinta xirfadaha shisheeye. Software waxuu si ay u bartaan luuqado badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Isbaanishka, Faransiiska, Jarmalka, Portugal, Talyaaniga iyo qaar kaloo badan. Duolingo ka mid ah hababka kala duwan ee waxbarashada kaas oo awood u siinaya inay ku bartaan luqadda heer bilow ah oo u waasiciyo erayada ama aqoonta naxwaha aad. Horumarinta ee luqadaha ee software ay u dhisan tahay hab ciyaar ka dhigaya barashada xiiso leh iyo wax soo saar leh a. Duolingo sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad Customize geedi socodka waxbarashada iyo tirada hawlaha maalinlaha ah.
Barashada Afka hab ciyaarta
Taageerada luqadaha caan
Hababka kala duwan ee waxbarashada
Comments on Duolingo:
Duolingo Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... TED 2.4.0
العربية, English, Українська, Français... ES File Explorer 4.0.4.7
English, Français, Deutsch, Русский... Dropbox 7.2.8
العربية, English, Українська, Français... Battery Doctor 5.9
العربية, English, Українська, Français... Kate Mobile 20
English, Українська, Deutsch, Русский... Mobile9 2.2.4
Qaar kale waxay Adeeggu wuxuu xor ah oo ka mid ah codsiyada kala duwan iyo ciyaaraha taas oo kale ah in ay Google Play. Software waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo qaybaha oo sharaxaad faahfaahsan ee alaabta.
Games Kulan Arcade ayaa la sheekooyin xiiso iyo saamaynta audio funny. In ciyaarta jiraan heerar badan oo sii kordhaysa adayga iyo jilayaal kala duwan leh awoodo gaar ah.